Xiinxala Obbo Leta Kenei Aga finfinne taa’ee waa’ee hirmaannaa Oromoo DC xiinxaleef deebii Jaboo Oromia deebise isa armaan gadii kanadha – Kichuu
Xiinxala Obbo Leta Kenei Aga finfinne taa’ee waa’ee hirmaannaa Oromoo DC xiinxaleef deebii Jaboo Oromia deebise isa armaan gadii kanadha
Xiinxala Obbo Leta Kenei Aga finfinne taa’ee waa’ee hirmaannaa Oromoo DC xiinxaleef deebii Jaboo Oromia deebise isa armaan gadii kanadha.
Obbo Lataa Qana’ii Aaga,
Yaadakee siif ni kabajna. Garuu dogoggora bakkeerraa hubatte tokko sirreeffachuu qabda. Isaan keessas:
1. Naannoo Washington DC tti Oromoofi Habashaan takkaa waltajjii tokkorrattii hirmaatanii hin beekani. Lachanuu Community Mootummaa Wahington DC beekkamtii qaban qofaatti qabu. Kunimmoo akka ani yaadutti callisee waan diigamu miti.
2. Kan ofii qabatanii walga’icharratti hirmaachuuf Ilaalchi Dr Abiy Murteessadha. Akkuma mul’achaa jiru Dr. Abiy suutuma suutan maqaa Oromummaa irraanfachiisuu, qabsoo Oromoon gaggeessu xiqqeessuu, Hojjaa Mootota Habashoota duraani ol kaasanii mul’isuufi Ethipia durii deebifna jechaa jira. Kan habashoota onnachiisees kanuma. Oromoon garuu kana keessatti hirmaachuuf yoo xiqqaate 25% keessatti of arguu qaba. Hanga ani hubadhutti deemsa Dr. Abiy keessatti Oromoon harka 5% of argaa hin jiru. Kanaaf Oromoo nannaa DC komachuunkee hubannaa dhabuukee agarsiisa.
3. Oromoon waggaa 150 keessumaa immoo waggaa 50 darbe haala qindaa’een habashaa falamaa , dhalasaa wareegaa as ga’e.Dr. Abiy kana waan hubate natti him fakkaatu. Kanaaf Oromoon kana amansiisuuf jecha habashaa waliin katee hin afarsu.
4. Dhimma ABO Ilaalchisee
kan dide Lammaa Magarsaa akka ta’e , dhimma kanaan Dr. Abiy waliin akka wal dhaban , wal ga’ii waamameeyyuu aariidhaan hirmaachuu akka dide sirriitti dhagahameera. ABOn akka galu kan hin barbaanne Obbo Lammaa Akka Ta’e hubadhu. Maaliif kan jedhu yoo dandeesse isuma gaafadhu
5. Oromoon habeshaa waliin. yoo madaalte waan wal hin agarre madaalaa jirta . Oromoon akkatti nama dubbisu, dubbatu safuusaa akkasumatti aadaafi duudhaan adda. Oromoon of mumul’isuuf hin hojettu.
Oromoon sobaan bira hin faakkaatu. Sobaanis mirgasaa dabarsee waan laatu him fakkaatu.
1. Oromoon qabsoosaa kan keessa deebii hin qabne qabsaa’uu
2. Gaaffisaa tokko lamaan gaafachuu
3 . “Medemer” keessan kana cinatti dhiisee qabsoo isa ka’eef galmaan ga’uu
4. Tokkummaa habashaa kamiyyuu seeraafi duudhaa Oromoo kan gidduu gala godhateen ta’uu mala.
5. Dr. Abiy yoo dandeesaaan qabsoo tayitaatti isa fide Maal akka ta’e irra deebi’ee akka xiinxalu yadachiisuusdha.
Kanaaf Oromoon Washington DC waan gaarii akka hojettan beekuu qabdaan
Gaaddisa Dhugaa Adoolessa 29 bara 2018
በደረሰን መረጃ መሰረት መነሻቸው ከትግራይ የሆነ #ሰላሳ__ሰባት_ኦራሎች ትናንት ምሽት ጀምሮ ከአቅም በላይ ወታደሮችን ጭነው አየር መቃወሚያ ሳይቀር በኮንቦይ እየታጀቡ በጉዞው ላይ ታይተዋል፡፡
ህወሓት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በህገወጥ መንገድ አፀደኩኝ ባለ በሰዓታት ልዩነት ከሰሜን ግንባር ያሉ ወታደሮችን ንፁሃንን ለመጨፍጨፍ ህወሓት የራሱን ታማኝና ቅልብ ጦር አንቀሳቅሷል ፡፡
SBO: Adoolessa 29, 2018. Oduu, Gaaffii fi Deebii Miseensa GS-ABO fi Miseensa Koree WBO Zoonii Kibbaa